Yintoni i-Surf-Out Surfboard?
Phuma kwi-surfboards zii-surfboards ezakhiwe ukusuka kwesikhunta kunokuba zifakwe kwinqanaba. Umbhobho we-surfboard usekelwe kwimoko yangaphambili kwaye ubuninzi buveliswe ngendlela yenkqubo yomgca wendibano. Le ndlela ede kakhulu ukusuka kwiingcambu zengcweti ye-surfboard kodwa luphawu lwexesha. Ngamanani amaninzi e-surfers emanzini kunye ne-intanethi evumela iinkampani ukuba zifike kwiimarike zomhlaba wonke, ukuphuma kwi-surfboards kunceda iinkampani ezinkulu ukuba zenze iibhodi zazo zibe ngezandla ezininzi.
Ukukhupha kwi-surfboards ngokuqhelekileyo kwenziwa nge-plastc okanye i-resin eninzi. Oku kwenza ukuba uphume kwi-surfboard iqine kakhulu kwaye ukubonelela kwazo kuninzi kugcina ixabiso eliphantsi kwaye ngaloo ndlela kuyona ndlela enokukhetha ukulungiselela i-surf yokuqala okanye engaphantsi.
I-flip kwicala lokuphuma kwi-surfboard liza kwi-Wal-Mart njengengqondo yokukhukula kwiimarike kunye neebhodi ze-clone eziveliswe ngobuninzi, eziye zachaphazela kakhulu i-backpad shapers. Abaninzi abasaziwayo, nangona kunjalo, baye bajoyina iinkampani ezinkulu ze-conglomerate ezinokuthi zitshintshe isimo esithandwayo kwizigidi zabantu. Ngenxa yokwakhiwa kwayo, ukuphuma kwi-surfboards ngokuqhelekileyo kunzima kunabo abathandekayo kunye kwaye abanqwenelekayo kunokuba baninzi kakhulu, abanamava, okanye abanokuzivocavoca abangakumbi.
Nangona i-ingxoxo phakathi kwesithethe kunye nokupasa kwi-surfboards idibeneyo, nantsi ingqinisiso yangempela:
Phuma kwi-surfboards zilungile kubaqalayo kunye neeveki zempi ngokuya kweendleko kunye nokwakhiwa.
Ii-surfboards eziqhelekileyo zilungele ukufikelela kwi-surfes eziphambili ngokubhekiselele kwintsebenzo kunye neendlela zabo zokwakha.
10 Ngokutsha okuphelileyo, iiBats kunye neeRoda
Uluhlu lweeMidiya zithathwe kwiiKhaya zeeKhaya zeeKhaya
Ukuvakalisa Ingxoxo Ukuqonda Ukufunda - Ukuqaphela Ngoobani Ndangena?
Iqela elidlulileyo lokuthatha inxaxheba
10 Uninzi lweeNkcazo eziPhambili kuma-2000
Ngaba Iimfazwe Ziyingxenye Yenkolo Zabahedeni?